नेपाली क्रिकेटका सफल कप्तान – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
प्रिन्सिपलको कुटाइबाट विद्यार्थी गम्भीर घाइते
पोलिटब्यूरो सदस्यहरुको नाममा विवाद भएपछि माओवादीको बैठक स्थगित
पछिल्लो चौबिस घण्टामा थपिए कोरोनाका ७८ जना नयाँ संक्रमित
प्रचण्डद्वारा १२५ पोलिटब्युरो सदस्यको नाम प्रस्ताव (नामसहित)
सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुपर्छ :
काठमाडौँमा साझाका विद्युतीय बस सरर
नेपाली क्रिकेटका सफल कप्तान
१ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०४:३१
Read Time = 15 mins
A A- A+
काठमाडौं । पारस खड्काले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट खेल्न थालेको १५ वर्ष भयो । २००४ मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेयता उहाँ कहिल्यै नेपाली टोलीबाट छुट्नुभएन । एक वर्षअघि उहाँले राष्ट्रिय टोलीबाट सन्न्यास लिइसक्नुभए पनि नेपाली क्रिकेट भन्नेबित्तिकै समर्थकलाई पारस खड्काको याद आइरहन्छ ।
दुई वर्षअघि कप्तानी छाड्नुअघि उहाँले नेपाली टोलीलाई दश वर्ष नेतृत्व दिनुभयो र परिचय बनाउनुभयो, सफल कप्तानको । पारसको कप्तानीमा नेपालले आधुनिक क्रिकेटका ठूलठूला सफलता हात पा¥यो । उहाँको कप्तानीमा नेपाल डिभिजन पाँचबाट एकसम्म उक्लियो । टी-२० विश्वकप नै खेल्यो । यस्तै नेपालले हालसम्म हात पारेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडिआई) को मान्यता पनि उहाँकै कप्तानीमा हासिल भयो । त्यतिमात्र हैन, उहाँकै कप्तानीमा नेपालले पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टी-२० शृंखलासमेत जित्यो ।
खड्का नेपाली टोलीका अलराउन्डर हुनुहुन्छ । दाहिने हाते पारस मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान तथा मध्यम तीव्र गतिका बलर हुनुहुन्छ । उहाँ आवश्यकताअनुसार अफब्रेक स्पिनसमेत गर्नुहुन्छ । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध अगस्ट २०१८ मा उहाँको डेब्यु भएको थियो । त्यही नै नेपालले खेलेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय शृंखला पनि हो ।
खड्का नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा शतक प्रहार गर्ने छैटौँ खेलाडी पनि हुनुहुन्छ । कुवेतविरुद्ध २०१२ को एसिसी ट्रफी इलाइटमा उहाँले ७७ बलमा १०६ रनको पारी खेल्नुभएको थियो । त्यसयता पारसले चार शतक प्रहार गरिसक्नुभएको छ । नेपाली टोलीबाट चार अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गर्ने उहाँ एक्लो खेलाडी हुनुहुन्छ ।
२०१९ जनवरीमा युएईविरुद्धको एकदिवसीय शृंखलाका क्रममा उहाँले शतक प्रहार गर्दै ओडिआई क्रिकेटको नेपालका लागि शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बन्नुभयो । उहाँकै कप्तानीमा त्यसबेला नेपालले युएईविरुद्धको तीन खेलको ओडिआई शृंखला दुई÷एकले जितेको थियो । सोही वर्ष सेप्टेम्बरमा युएईविरुद्ध टी-२० आईमा पनि शतक प्रहार गर्दै उहाँ यस फम्र्याटमा पनि शतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्नुभएको थियो ।
सन् २००९ देखि विनोद दासको स्थानमा पारस कप्तान बन्नुभएको थियो । तिनै दासले नै अघिल्लो वर्ष पारसले कप्तानी छाड्दा उहाँको कप्तानी अझै केही वर्ष नेपाली क्रिकेटलाई आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘पारस कुशल कप्तान हुन् । उनीसँग क्रिकेटको प्रशासनिकलगायत व्यवस्थापन गर्ने खुबी पनि छ । पारसले सबैलाई प्रेरित गर्नुभएको छ,’ दास भन्नुहुन्छ, ‘हामीले भनिराख्नुपर्दैन पारस नेपाली क्रिकेटले पाएको अहिलेसम्मकै ठूलो स्टार हुन् । पारसको नेतृत्व अनुभव अझै केही समय नेपाली टोलीलाई आवश्यक छ ।’
काठमाडौंकै रैथानै पारसले टुँडिखेलबाट क्रिकेटको कखरा सिक्नुभएको हो । तर, १५ वर्ष उमेरसम्म पनि उहाँले क्रिकेटलाई जीवनमा अँगाल्ने सोचिसक्नुभएको थिएन । ‘स्पोर्ट्समा रुचि थियो । क्रिकेट, बास्केटबल, फुटबल खेल्थेँ । वरपरको माहोल पनि त्यस्तै थियो । तर, स्पोर्ट्सलाई नै करिअर बनाउँछु भन्ने कहिल्यै सोचिनँ,’ पारस सम्झनुहुन्छ, ‘पढाइमा राम्रो थिएँ । त्यसैबाट कुनै करिअर बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ ।’
स्कुलमा पारस साथीहरूसँग हल्काफुल्का क्रिकेट पनि खेल्नुहुन्थ्यो । टुँडिखेल, च्यासल मैदानमा शुक्रबार, शनिबार साथीहरूसँग पारस क्रिकेट खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो । कक्षा दशमा अध्ययनका बेला केबी खत्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भयो । साथीहरूसहित उहाँले स्कुलमा खेलकुद शिक्षकलाई उक्त प्रतियोगिता खेल्नुपर्ने माग राख्नुभयो । शिक्षकले पनि मान्नुभयो । कीर्तिपुरमा भएको उक्त प्रतियोगिता पारसको कप्तानीमा उहाँकै स्कुलले जित्यो ।
त्यस प्रतियोगितालाई नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय यु-१५ टोली निर्माणका लागि क्षेत्रीय छनोटका रूपमा पनि लिएको थियो । उपाधि जिताउने कप्तान पारस छनोट नहुने कुरै भएन । पारससहित उहाँको स्कुलबाट अन्य दुई खेलाडी पनि छनोट हुनुभएको थियो ।
सोही छनोटबाट १५ वर्षमुनिको राष्ट्रिय टोलीमा छनोट हुनुभयो । त्यसपछि बल्ल उहाँको रुचि क्रिकेटतिर जाग्न थालेको हो । लगत्तै पारसले २००२ मा युएईमा भएको यु-१५ एसिया कपमा पहिलोपटक नेपाली जर्सी लगाउनुभयो । त्यसपछि उक्त जर्सी उहाँबाट छुटेन ।
भारतमा एसिसी अन्डर–१७ कप खेलेपछि उहाँले बंगलादेशमा २००४ मा भएको आइसिसी यु-१९ विश्वकप खेल्नुभयो । सोही प्रतियोगितामा नै नेपालले टेस्ट राष्ट्र बंगलादेशलाई पराजित गरेको थियो ।
सन् २००४ मा नै उहाँले एसिसी इन्टरकन्टिनेन्टल कपअन्तर्गत काठमाडौंमा भएको मलेसियाविरुद्धको खेलबाट सिनियर टिममा डेब्यु गर्नुभएको थियो । त्यही वर्ष क्वालालम्पुरमा उहाँले एसिसी ट्रफीमा सहभागिता जनाउनुभयो ।
त्यसपछि पुनः यु–१९ टोलीमा फर्कनुभएका पारसले २००५ को एसिसी यु-१९ एसिया खेल्नुभयो । नेपालमा नै भएको उक्त प्रतियोगिताको फाइनलमा मलेसियालाई पराजित गर्दै नेपालले उपाधिमाथि कब्जा जमाएको थियो । २००६ मा टेस्ट राष्ट्र न्युजिल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गर्दै नेपालले प्लेट च्याम्पियन्ससिपको उपाधि जितेको क्षण पारसको दिमागमा अझै ताजै छ ।
२००८ मा मलेसियामा भएको आइसिसी यु-१९ क्रिकेट विश्वकपबाट पारसले उमेर समूहको क्रिकेटमा नेपालको कप्तानी गर्नुभएको थियो । त्यसबेलै पारसलाई राष्ट्रिय टोलीको उपकप्तानसमेत बनाइएको थियो । तर, त्यसबेला नेपालमा खेलको कुनै भविष्य नभएको मानिन्थ्यो । अभिभावक पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो पढेर राम्रो जागिर खाओस् भन्ने चाहन्थे ।
प्लस टु अध्ययन सकेर लाग्नुभएका पारसले पनि त्यो कुरा विचार गरिरहनुभएको थियो र उहाँले उच्च तहको अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने सोच बनाउनुभयो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुभयो । ‘तर, भाग्य भनौँ कि दुर्भाग्य त्यसबेला मेरो अस्ट्रेलियाको भिसै लागेन । त्यसबेला भिसा नलागेकोमा केही दुःख लागे पनि अहिले भने भिसा नलागेकोमा खुशी छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २००९ मा पारसले पहिलोपटक नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हाल्नुभयो । कप्तानी सम्हालेको अर्को वर्ष नै नेपाललाई उहाँले डिभिजन पाँचको उपाधि दिलाउनुभयो । त्यसबेला आइसिसीअन्तर्गत नेपालले जितेको यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता थियो । कीर्तिपुर मैदानमा भएको उक्त प्रतियोगिताको उपाधि उचालेपछि पारस नेपाली क्रिकेट समर्थकबीच लोकप्रिय बन्दै जानुभएको थियो ।
नेपाली क्रिकेटको विकास २०१० अघि नै भइसके पनि २०११ मा पुबुदु दासनायके प्रशिक्षक भएर आएपछि नेपाली क्रिकेटले योजनाबद्ध ढंगले खेल्न थालेको पारस बताउनुहुन्छ । पारसको नेतृत्व र पुबुदुको योजनामा नै त्यसपछि नेपाली क्रिकेटले ठूलो फड्को मार्‍यो ।
त्यसपछि उहाँको नेतृत्वमा नेपालले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै गयो । २०१२ मा मलेसियामा भएको डिभिजन चारको उपाधि नेपालले उहाँकै कप्तानीमा जित्यो । त्यसै वर्षको एसिसी ट्रफी इलाइटको उपाधि नेपालले जित्दा पारस प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनुभएको थियो ।
सन् २०१३ मा बर्मुडामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ३ मा नेपाल च्याम्पियन बन्दै टी-२० विश्वकपमा छनोट भयो । त्यसबेलादेखि नेपालमा क्रिकेट लोकप्रिय बन्दै गएको हो । त्यसबेला खेलाडीहरूलाई विमानस्थलबाट उपत्यकाको परिक्रमा गराइएको थियो । ठूलो संख्यामा समर्थकहरू उपस्थित थिए ।
उहाँकै कप्तानीमा इतिहासमा नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको टी-२० विश्वकप खेल्यो । हङकङविरुद्ध उक्त विश्वकपको पहिलो बलमै इर्फान अहमदको विकेट लिँदै उहाँ विश्वकपको पहिलो बलमै विकेट लिने विश्वकै आठौँ खेलाडी बन्नुभएको थियो ।
अफगानिस्तानविरुद्ध सो विश्वकपमा नौ रनको सनसनीपूर्ण जित निकाल्नेक्रममा पारसले दुईवटा उत्कृष्ट क्याच लिनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँलाई धेरै मिडियाहरूले नेपालको कपिल देव भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।
पारसको कप्तानीमा नेपालले २०१५-१७ सम्म विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियन्ससिप खेल्यो । त्यसबाट डिभिजन दुईमा रहेको नेपालले २०१८ को फेब्रुअरीमा डिभिजन दुईको उपविजेता बन्दै अर्को महिना जिम्बाबेमा हुने विश्वकप छनोटमा स्थान बनायो । उक्त छनोटको आठौँ स्थानमा रहँदै नेपालले ऐतिहासिक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।
पारस नेपालले ओडिआई मान्यता पाएको उक्त क्षणलाई आफ्नो क्रिकेट जीवनको नबिर्सने क्षण बताउनुहुन्छ । यसलाई विश्वकप पुग्नुभन्दा पनि ठूलो एचिभमेन्ट बताउने उहाँ चार वर्षका लागि मिलेको ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिन सबैजना एकजुट भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
प्रशासनमा आउने इच्छा
पारसले खेल जीवन त्याग्दा आफ्नो इच्छा क्रिकेट प्रशासनमा आउने बताउनुभएको छ । उहाँले खुलेरै भविष्यमा नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि माहोल मिल्यो भने क्यानको नेतृत्व गर्ने सोच भएको बताउनुभएको छ ।
‘भविष्यमा नेपाल क्रिकेट संघ वा बोर्ड जे हुन्छ त्यसको नेतृत्व गर्ने सोचेको छु । तर, त्यो सोचेजस्तो सजिलो छैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसका लागि पूरै नयाँ संरचनामा आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म मैले आफूलाई खेलाडीका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको छु । पदाधिकारी भएर आउने हो भने मैले पहिले क्रिकेटको विकासका लागि पनि काम गर्नुपर्छ ।’
पारसले आफूलाई क्रिकेट व्यवस्थापनमा पनि संलग्न गराउँदै आउनुभएको छ । नेपाली क्रिकेट निलम्बनमा हुँदा पारस कप्तानसँगै टोली छनोटकर्ता, मेन्टर, संयोजक, व्यवस्थापकको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । यस्तै उहाँको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी क्विन्स इभेन्ट म्यानजमेन्ट प्रालि पनि छ । जसले पोखरा प्रिमियर लिग र वुमन्स च्याम्पियन्स लिग आयोजना गर्दै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
रेणुकाको उपचारमा कमी हुन नदिने खेलकुद
क्यानडासंग नेपाल पारजित, चम्किएनन् व्याट्म्यान
विम्बल्डनस् नाडाल सेमिफाइनलमा
लंका प्रिमियर लिगमा सन्दीपले ५० लाख
रोयललाई यु-२३ बास्केटबल उपाधि
स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनताको हितमा काम
विवेकशील साझाको अध्यक्ष पदबाट रवीन्द्र
राष्ट्रिय खेलकुद सर्यो, असोज अन्तिम
आयरल्याण्डमा विश्व आलु सम्मेलन
स्वास्थमैत्री जीवनशैली प्रबद्र्धनमा प्राकृतिक चिकित्साको
वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा-सेवा कि यातना
कविता : निमन्त्रणा छ बालेन
गठबन्धनको भविष्य र असन्तुष्टहरूको गन्तव्य
मुलुकको साखसँग जोडिएको नेताको नाक
तिलाको नीति तथा कार्यक्रम :
तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेको हेटौंडा
मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको
वामपन्थीहरु तत्काल एकता नभएपनि
बुढानीलकण्ठको मेयर/उपमेयरमा एमाले विजयी
स्थानीय निर्वाचन २०७९
प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल
सूचना विभाग दर्ता नंः
०१-४४६६३९३ / ०१-४४७८१७७